La kulan- taageeraha ugu weyn kooxda Manchester United | Radio Himilo
Home / Cayaaro / La kulan- taageeraha ugu weyn kooxda Manchester United
La kulan- taageeraha ugu weyn kooxda Manchester United
Posted by: Ahmed Haaddi March 15, 2019
Jimmy wuxuu ahaa taageere United muddo 40 sano ah. Markii uu caruur ahaa, aabihiis ayaa u qaaday inuu daawado kulan ay wajaheen Blackburn Rovers kuwaas oo ku jiray qeybta saddexaad wakhtigaas oo ay heleen dad badan oo 10,000 ah.
Markii ugu horreysay ee uu tago Old Trafford waxay aheyd 6-dii October 1979-kii. Waxa uu ahaa kulan ay la ciyaareen Brighton xilli United ay 2-0 ku badisay, isaguna waxa uu ahaa 14 jir.
“Markii aan garoonka tegay waxa uu ahaa sida tan ” Tani waa meesha aan doonayo. Aniga ayaa u hibeeyay tan iyo markaa. “
Afartan sanno ka dib oo uu weli yahay taageere.Wuxuu tikid xilli ciyaareed ah ku lahaa West Stand 23-kii sanno ee ugu dambeysay.
Jimmy ayaa qirtay inuu nasiib u yeeshay muddo 40 sano ah. United ayaa badisay kulankeedii ugu dambeeyay, laakiin waxa ay sameysay kor u kac iyo hoos u dhac, hase yeeshee waxa ay aheyd in ay kor u kacaan gaar ahaan tan iyo Sir Alex Ferguson ilaa waqtigaas Wuxuu xusuustaa hadalkii “Fergie out”.
Dhacdooyinka gaarka ah ee uu xusuusta ee Old Trafford waxaa kamid ah goolkii Paul Scholes ee Barcelona ee 2007/8 lugta labaad ee semi-finalka Champions League iyo goolkii Andy Cole kulankii ugu dambeeyay ee sannadkii 1998/99 oo ay la qaateen Spurs, taasi oo qeybisay qeybtii koowaad ee ciyaarta. seddex jeer.
Ciyaartii ugu fiicneyd ee uu abid daawado waxay aheyd FA Cup heerka semi-final-ka kulankii Arsenal ee ka dhacay Villa Park 1999-kii. Waxa uu ku faraxsan yahay in uu baxo Mourinho, halka Ole uu sii joogo kooxda, laakiin waxa uu dhaliilsan yahay in aan wakhti badan la siin David Moyes.
“Waxaan daawaday meel walba oo agagaarka Old Trafford ah. Markii United ay dooneysay inay tagto garoonka oo dhan dhamaadkii xilli ciyaareedkii 1991dii, waan ku faraxsanahay sida aan u jeclahay kubadda cagta. “
Previous: Maqal:- Casharka Safiinatu Najaa “Darsiga 10aad”
Next: Maqal:- Barnaamijka Kas-wadaag
Takumi Minamino oo loo iibin doono saxiixa ciyaaryahan